गुलाफको रंगअनुसार गुलाफले दिने अर्थ - E Net Nepal
Home Love Special Valentine's Day गुलाफको रंगअनुसार गुलाफले दिने अर्थ
गुलाफको रंगअनुसार गुलाफले दिने अर्थ
E NET NEPAL 11:30 PM Love, Special, Valentine's Day,
भ्यालेन्टाइन्स डे प्रेम गर्नेहरुका लागि बिशेष दिन । तर यस दिनमा प्रयोग हुने हरेक कुराहरुले अर्थ राख्छन । भ्यालेन्टाइनमा मुख्य गरि प्रयोग हुने बस्तु भनेको गुलाफको फूल नै हो । त्यसैले गुलाफको बारेमा जान्नु अत्याबश्यक छ । आउनुहोस जानौं गुलाफका रंग अनुसार तिनीहरुको अर्थ :
रातो(हल्का चम्किलो रातो देखि गाढा रातो) - प्रेम, सौन्दर्य
रातो (गाढा) गुलाफ : अचेत/अज्ञात सौन्दर्य
रातो (एउटा) गुलाफ : म तिमीलाई प्रेम गर्छु !
रातो गुलाफ ति व्यक्तिहरुलाई दिइन्छ जसप्रति आफ्नो प्रेम दर्शाउनका लागि आवश्यक छ । साथै रातो गुलाफलाई उत्साह दर्शाउन पनि प्रयोग हुन्छ । रातो गुलाफ ति व्यक्तिहरुलाई दिइन्छ जसलाई तपाई प्रेम गर्नुहुन्छ, जसप्रति तपाई आफ्नो आदरभाव व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ । जसले बहादुरी प्रदर्शन गरेका छन् उनीहरुलाई पनि उनीहरुको साहसको कदर गर्दै रातो गुलाफ दिने गरिन्छ ।
गुलाफको संख्याले पनि छुट्टै अर्थ राख्न सक्छ । एउटा रातो गुलाफले प्रेमलाई दर्शाउछ । जबकी एक दर्जन गुलाफले कृतज्ञतालाई जनाउँछ । त्यस्तै पच्चीस गुलाफको समुहले भने बधाईलाई जनाउँछ र पचास गुलाफहरुले भने बिना शर्तको प्रेमलाई जनाउँछ ।
रातो गुलाफको छाँयाले पनि बिशेष अर्थ राख्दछ । चम्किलो रातोको मतलब प्रेम हुन्छ भने गाढा रातोले भने अचेत वा अज्ञात प्रेमलाई दर्साउँछ धेरै गाढा रातो गुलाफलाई शोक देखाउन प्रयोग हुन्छ । एउटा सुकेको रातो गुलाफलाई प्रेममा बिछोड वा प्रेमको अन्त्यलाई दर्साउन प्रयोग हुन्छ । त्यस्तै हाँगासहितको रातो गुलाफले भने जोशपूर्ण प्रेम र सुन्दरतालाई जनाउँछ ।
पहेंलो गुलाफ (हल्का पहेंलो देखि गाढा पहेंलो)
पहेंलो गुलाफ : हर्ष, खुशी, मित्रता, एउटा नयाँ सुरुवातको कसम, पुन: स्वागत छ, मलाई सम्झनुहोस, डाहा, म तिमीलाई ध्यान दिन्छु !
पहेंलो गुलाफ ति ब्व्यक्तिहरुलाई दिइन्छ जोसंग तपाई आफ्नो खुसि, हर्ष साट्न चाहनुहुन्छ । साथै नयाँ मित्रलाई पनि पहेंलो गुलाफ दिने गरिन्छ । कसैलाई स्वागत गर्न वा कसैलाई म तिम्रो ख्याल राख्छु भन्न पनि पहेंलो गुलाफ प्रयोग हुन्छ । त्यस्तै कुनै नयाँ कुराको सुरुवातको बाचा गर्नका लागि पनि यसको प्रयोग गरिन्छ
बैजनी - आभार (हल्का बैजनी देखि गाढा बैजनी )
बैजनी गुलाफ : प्रशंसा, धन्यवाद, अनुग्रह, परिपूर्ण खुशी, नम्रता मलाई बिश्वास गर सहानुभूति
बैजनी गुलाफ ति व्यक्तिहरुलाई दिइन्छ जसलाई तपाई धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ अर्थात कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ वा जोसंग तपाई आफ्नो खुशी बाढ्न चाहनुहुन्छ वा त कसैको प्रशंसा गर्न पनि बैजनी गुलाफ दिने गरिन्छ ।
गाढा बैजनी गुलाफ कसैलाई आभार प्रकट गर्न वा कसैको सराहना गर्नका निमित्त दिइन्छ । जबकी हल्का बैजनी गुलाफले प्रशंसा र सहानुभूति प्रकट गर्न सहयोग गर्छ ।
सुन्तला - इच्छा
सुन्तला गुलाफ : इच्छा, उत्साह, सम्मोहन
सुन्तला रंगको गुलाफ बिशेष गरि तिनीहरुलाई दिइन्छ जसलाई तपाई चाहनुहुन्छ जसको बारेमा तपाई अझ धेरै जान्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाई जसप्रति गर्व गर्नुहुन्छ ।
पहेंलो - मित्रता हल्का गुलाबीदेखि सुनौलो
पहेंलो गुलाफले खुशी हर्ष र मित्रता दर्साउँछ । पहेंलो गुलाफ खासगरी नयाँ आमा भर्खरै बिबाहित र ति व्यक्तिहरु, जसलाई तपाई ध्यान दिनुहुन्छलाई दिने गरिन्छ । पहेंलो गुलाफलाई तपाई कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उ/उनलाई ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने देखाउन प्रयोग गरिन्छ ।
पहिले पहिले भने पहेंलो गुलाफ डाहा र प्रेममा खस्कदो अवस्थालाई प्रस्तुत गर्न प्रयोग हुन्थ्यो ।
सेतो - शुद्दता शुद्द सेतो देखि एकदमै हल्का बैजनी
सेतो गुलाफ : शुद्दता,मौनता, गोप्यता, श्रद्दा, विनम्रता मा तिम्रो लागि लायक छु !
ब्राइडल सेतो गुलाफ : सुखी र खुसि प्रेम
सेतो गुलाफ ति व्यक्तिहरुको निर्दोषता श्रद्धा र शुद्दता जनाउन प्रयोग हुन्छ । सेता गुलाफहरु सामान्यतया बिबाहहरुमा एकदमै प्रयोग हुन्छ सेता गुलाफहरुलाई गोपनियताको संकेत मानिन्छ । हाँगासहितको सेतो गुलाफ भने कौमार्यको प्रतीक हो ।
सुकेको सेतो गुलाफले भने "सदाचारको अन्त्यभन्दा उत्तम मृत्यु हुन्छ" भन्ने जनाउँछ । भने ओइलाएको सेतो गुलाफले भने केहि क्षणका लागि अर्थात् क्षणभरका निमित्त देखावटी सुन्दरता वा देखावटी प्रभाव भन्ने अर्थ दिन्छ ।
प्याजी गुलाफ : पहिलो हेराइमा एकातर्फी प्रेम, आकर्षण
प्याजी गुलाफले तपाई कसैलाई देख्नेबित्तिकै प्रेममा पर्नुभएको जनाउँछ । प्याजी गुलाफ त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिन्छ, जो तपाईलाई आकर्षक लाग्छन अथवा तपाईलाई अद्वितीय लाग्छन ।
माथि उल्लेखित बाहेकका अन्य रंगका गुलाफले भने निम्नानुसार अर्थ दिन्छन :
कालो गुलाफ : मृत्यु, बिदाइ
निलो गुलाफ : अप्राप्य, असम्भव
जुनसुकै रंगको एउटा गुलाफ (कालो र निलो बाहेक) : आभार र सरलता
पहेंलो र रातो गुलाफ : मित्रता, प्रेममा पर्दै छु !
रातो र सेतो गुलाफ एकैसाथ : एकता
रातो र पहेंलो गुलाफ : खुशी र प्रशन्न भावना
रातो हाँगासहितको गुलाफ : प्रिय
सेतो हाँगासहितको गुलाफ : कौमार्य
काँडा रहित गुलाफ : पहिलो हेराइमा एकातर्फी प्रेम
तपाई गुलाफको रंग अनुसार गुलाफको अर्थको बारेमा यति कुरा जानेर पनि गलत रुपमा प्रस्तुत हुन चाहनुहुन्छ र ? अवश्य पनि चाहनुहुन्न होला । खाली प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाइन डे) को दिन मात्र होइन, अरु दिनमा पनि तपाई गुलाफको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तर रंगको संयोजन अथवा रंगमा भने तपाईले ध्यान दिनुपर्नेछ । रंगले तपाईको भावनालाई प्रस्तुत गर्न महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दछ । तपाईले छान्नुभएको गुलाफमा के अर्थ लुकेको छ भन्ने कुरा बुझेर गुलाफको माध्यमबाट पनि तपाईले आफुले भन्न चाहनुभएको कुरा वा उ/उनीप्रतिको तपाइको भावनालाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ । हो, कतिपय अवस्थामा यस्तो पनि हुन सक्छ कि, तपाईले जसलाई गुलाफ पठाउँदै हुनुहुन्छ, उसले तपाईले पठाउनुभएको गुलाफको अर्थ नबुझ्न पनि सक्छ । यस्तो अवस्थाको लागि तपाईले ग्रिटिंग कार्डको प्रयोग गर्नु एकदमै उपयोगी हुन्छ । त्यसैले यदि तपाई आफ्नो साथि, प्रेमी/प्रेमिका वा अन्य कसैलाई गुलाफ पठाउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया फूलसंगै कार्ड पठाउन चाहिं नभुल्नुहोला ।